Nagu saabsan - Hebei Beimudou Trading Co., Ltd.
Ku soo dhawow Hebei Beimudou Trading Co., Ltd.
Waxaan nahay Hay'ad Hal abuur Xirfad Leh
Hebei Beimudou Trading Co., Ltd., oo ku taal Shijiazhuang, Gobolka Hebei, waa shirkad ganacsi oo soo dejin iyo dhoofinta xirfad leh, waxaan leenahay sannado badan oo ganacsi baaskiil, Xarumaheena wax soo saarka cilmi baarista iyo xarumaha horumarinta ee ku yaal Tianjin iyo Hebei, wax soo saarkayada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah baaskiil buuro, baaskiil isku laaban, baaskiil magaalada, baaskiilada caruurta iyo baaskiil dheelitir ah
Dhammaan alaabooyinkeennu waxay u hoggaansamaan heerarka tayada caalamiga ah waxaana si weyn looga mahadceliyaa suuqyo kala duwan oo adduunka ah.
Waxaan soo bandhigi karnaa xulashada nidaamka bixinta tayada sare leh, kormeerka habka wax soo saar tayo sare leh iyo xakamaynta faahfaahinta imtixaanka tayada sare leh. Waxaan haysannaa waqti geyn degdeg ah oo leh qiimaha tartanka suuqa.
√ Waxaan haynaa qaabab aad u tiro badan oo iibsadaha uu doorto, sidoo kale waxaan u cusbooneysiin doonaa xilliyada caadiga ah, Bakhaarkeenu wuxuu leeyahay tiro badan oo baaskiillo ah, maalin kasta waa la cusbooneysiin doonaa tirada, waxay badbaadin doontaa waqti badan oo iibsadayaasha ay ku helaan alaabada, Gaarsiinta degdegga ah iyo dhaqsaha badan. adeegga iibka ka dib jawaab-celinta ayaa ah astaamaha shirkadeena.
Company Shirkadeena waxay sifiican u iibineysaa in kabadan 20 gobol iyo magaalooyin ee Shiinaha waxaana loo dhoofiyaa in kabadan 30 dal iyo aagag sida USA, Russia, France, Canada, Australia, India iyo wixii la mid ah.
√ Waxaan soo saari karnaa alaabooyinka ku saleysan baahida macaamiisha.Waxaan bixin karnaa adeegga OEM, Naqshadeyntaada iyo astaantaada waa la soo dhaweynayaa. Waxaan haynaa sumadeena beimudou, waxaan si daacad ah u raadineynaa wakiilo dalal kala duwan.
Waxaan diyaar u nahay inaan si daacadnimo leh ulashaqeyno ganacsatada Shiinaha iyo ajaanibta ah si loo abuuro berri gacmaha isqabsada. Fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto si aad u hesho macluumaad dheeraad ah aad ayaana ugu faraxsanahay inaan helno warqaddaada.
Company Shirkadeena oo ku saleysan mabda'a "Tayada sare iyo sumcadda", macaamiisha gudaha iyo dibaddaba waxaan soo dhaweyn doonaa annaga oo si daacad ah uga hadlayna iskaashiga ganacsiga iyo muddada dheer si aan u dejino mustaqbal ifaya
Baaskiil Balance Caruurta, 20 Baaskiil Inch / Baaskiil, Balance Baaskiil, Baaskiiladaha, Balance Baaskiil, Baaskiil Balance Balance,